သင်ရှာဖွေခဲ့သည် #NABshow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » #NABshow: ရှာရန်ရလဒ်များ
2020 #NABShow: မင်း Pass သွားပြီလား
သင်၏ #NABShow 2020 pass အတွက်သင်မှတ်ပုံတင်မထားပါကဘာတွေရပ်တန့်သွားမည်နည်း။ မင်းရဲ့သူဌေးလား ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာပြissueနာကိုဖြေရှင်းသင့်တဲ့ဟိုက်ပါလင့်ခ် (nabshow.com/2020/attend/why-attend/convince-my-boss/) အမှန်မှာ၊ သူဌေးနှင့်သင်၏ကိစ္စကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်မကြာမီတင်ထားမည့်စာပုံစံတစ်ခုရှိလိမ့်မည်! ဒါ့အပြင်ပြီးပြည့်စုံသောပြပွဲဖန်တီးကူညီရန်စီစဉ်ရှိပါတယ် ...
2020 #NABShow: NAB 2020 ကို Gaffigan မှ Kick off လုပ်ရန်!
Sပြီ ၁၉ ရက်ညနေ ၄ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် North Side ရှိ Main Stage ၌“ ဘေးထွက်ခြင်း” လူရွှင်တော် Jim Gaffigan သည် NAB Show အသစ်ကိုထုတ်လွှင့်မည်။ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်နှင့်လူရွှင်တော် Gaffigan သည်သူ၏ ၂၀၂၀“ Pale Tourist” ဟာသခရီးစဉ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောတက်ရောက်သူအားလုံးအတွက်ဖွင့်သည်။
2020 #NABShow: ကြိုတင်မြင်ကွင်းသည် 20/20: မီဒီယာ #BEAvegas ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်း
Broadcast Education Association (BEA) သည်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပညာပေးသူများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်ပညာရှင်များအတွက်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုတိုးတက်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာပညာရေးမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းတွင်းမီဒီယာသင်ယူခြင်းနှင့်လက်တွေ့နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာပေါင်း ၂၅၀ ကျော်နှင့်အတူသင်တန်းသားများသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလေ့ကျင့်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ လှုံ့ဆော်ခံရသည့်ကျောင်းသားများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များရရှိရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
@ ကိုရှင်းလင်းရန်-Com အမေရိကန် FreeSpeak Edge #AES နှင့် #NABShowNY 2019 ၏ပွဲဦးထွက် Presents
ALAMEDA, အမေရိကန်နိုင်ငံ - အောက်တိုဘာလ 3, 2019 - AES 2019 နှင့် NAB နယူးယော့ 2019 မှာ Clear ကို-Com® US မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်က၎င်း၏မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်အဆင့်မြင့်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်က FreeSpeak Edge ™သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်, စတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် SMPTE 2110-30 အထောက်အပံ့အပါအဝင်အိုင်ပီ-based ထုတ်ကုန်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ, ။ FreeSpeak Edge, အမှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင် ...
2019 #NABShow Live - 2020 NAB ပြပွဲ
အင်္ဂါနေ့၊ ညနေ ၁ နာရီ - Ryan Salazar Gu ည့်သည်များ - Jim Chabin - သမ္မတ၊ Advanced Imaging Society - AR / VR အသင်း၊ ခရစ်ဘရောင်း - အမှုဆောင် VP၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသံလွှင့်ဌာနသို့အသံလွှင့်သည်။
2019 #NABShow Live - တည်နေရာအခြေပြုဖျော်ဖြေမှု
တနင်္လာနေ့၊ နေ့လည် ၁၂း၃၀ အိမ်ရှင် - Brian Seth Hurst Gu ည့်သည်များ - နန်စီဘန်နက် - နှစ်ဘီးဆပ်ကပ်၊ Gregg Katano - Hologate, Jenni Ogden - Eye Q Productions, Lynn Rosenthal - Periscape VR အတွေ့အကြုံစင်တာများမှအသံလွှင့်ဌာနသို့အသံလွှင့်ဌာန၌စာရင်းသွင်းပါ။
2019 #NABShow Live - တနင်္လာနေ့ - အနာဂတ်ဇာတ်လမ်းပြောပြ pt1
တနင်္လာနေ့၊ ညနေ ၅း၀၀ အိမ်ရှင် - Ninaad Kulkarni နှင့် Pupul Bisht Gu ည့်သည်များ - James Cridland - ရေဒီယိုဗေဒပညာရှင် Richard Welsh - ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် | Sundog Media Toolkit, Ltd. , Andrew Shulkind - Content Innovation & Creative Technologies ၏ဒါရိုက်တာ | M.Bonnieux, Inc. အသံလွှင့်ဌာန၌ NAB Show LIVE မှထုတ်လုပ်သည့် Broadcast Beat ကိုစာရင်းသွင်းပါ
1 ၏စာမျက်နှာ 15712345 » 102030...နောက်ဆုံး»